Serivisy OEM - Hebei Fine Art Co., Ltd.
Mendrika ny tsara indrindra ianao
Ny marika manokana (serivisy OEM) dia iray amin'ireo fironana malaza miparitaka eto ankehitriny! Ary iza no afaka manazava tsara an'izany? Ianao! Rehefa ianao no vokatra tsara indrindra avy amin'Andriamanitra, nahoana ianao no hivarotra ny tenanao amin'ny hafa? Mendrika ny serivisy manokana ianao ary i Vannova no tolo-kevitra tsara indrindra amin'ny famoronana volomaso marika manokana ho an'ny orinasanao.
eyelashes Private Label (serivisy OEM)
Tsy mitombina fa tena zava-dehibe ho an'ny marika iray ny famonosana volomaso manokana marika, ka raha miara-miasa aminay ianao dia manampy anao izahay hamorona fonosana mahasarika sy miavaka indrindra. Ny ekipan'ny famolavolana manokana dia miantoka ny fonosana saro-pady ho anao, ary ny serivisy famolavolana dia maimaim-poana amin'ny famandrihanao betsaka. Ny fonosanay dia manana kalitao avo lenta satria ireo endrika rehetra ireo dia mampiasa lamaody maoderina ho fanondro ary koa manana fifandraisana akaiky sy mirindra miaraka amin'ireo orinasa famonosana maro sy orinasa fanontam-pirinty izay namorona ny kilasy voalohany an-trano amin'izao fotoana izao, ny fanamafisana ny fitaovana sy ny fahaiza-mamokatra iraisam-pirenena. fonosana fitaovana nandritra ny taona maro.
Private Label eyelash extensions private label eyelash Manjaka amin'ny karazana marika manokana maro ny fanitarana volomaso sy ny fomba famonosana volomaso ary afaka misafidy izay tianao ianao, Raha tsy misy karazana fankasitrahana anao dia afaka milaza fampahalalana manokana ianao hamaritana izay tianao, ary ireo mpanakanto amin'ny sary dia hiezaka hamorona programa manokana izay miasa ho an'ny orinasanao. Miantoka ny kalitao izahay ary manolotra serivisy aorian'ny varotra mahafinaritra ny fonosana rehetra namidy. Nanampy mpanjifa maro izahay hametraka ny marika fahombiazana ary hanokana ny serivisy amin'ny ezaka rehetra ataonay izahay. Aza misalasala mifandray aminay, vonona ny hiara-hiasa aminao ny ekipanay.
Ny fomba fiasan'ny Label Private
(1) Voalohany, mila manamafy ny baiko betsaka ianao;
(2) Lazao anay avy eo ny karazana fonosana tianao sy hevitra momba ny endrika tianao, halefanay any amin'ny mpanakanto sary ny zavatra takinao ary handamina ny famolavolana;
(3) Hanana drafitra famolavolana 3 farafahakeliny izahay ho fanondroanao. Fidio ny tsara indrindra tianao ary lazao anay raha mila fanitsiana ianao;
(4) Handefa ny famolavolana nohavaozina izahay hanamarina miaraka aminao;
(5) Raha afa-po ianao, dia hanao ny antontan-taratasy fanontana ho an'ny orinasa fanontam-pirinty taorian'ny fisavana telo. Ny orinasa fanontam-pirinty dia hanamafy sy handamina ny famokarana betsaka;
(6) Mahazo ny boaty kapoka farany izahay ary fenoy miaraka amin'ny kapohinao, dia alefanay aminao.